Inona no azontsika antenaina amin'ny Apple amin'ny 2018 | Vaovao IPhone
louis padilla | | About us, maro
Manomboka taona vaovao isika ary toy ny mahazatra dia mametraka ny filantsika amin'izay azontsika antenaina amin'ny orinasa manan-danja indrindra eto an-tany. Rehefa avy nanidy ny 2017 tamin'ny jiro sy aloka (mizara azy ireo ny tsirairay), Apple dia miatrika ny taona 2018 izay tsy maintsy hanohizany ny fampisehoana amin'ireo tsena sy ireo tsy mpino fa mbola mendrika hatrany ny toerana voalohany ao amin'ireo orinasa manandanja indrindra eto an-tany, ary ambonin'izany rehetra izany, ireo manan-kery indrindra.
Vokatra izay nambara fa mbola havoaka eny an-tsena, iPads vaovao, iPhones vaovao, ny fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela ny solosaina Mac miaraka amin'ny Mac Pro eo alohan'izy ireo ... ny lisitry ny lahasa miandry dia be dia be, ary tianay ny hamintina izay ho hitantsika ary inona afaka hitantsika tamin'ity taona ity izay manomboka androany.
1 Izay ho hitantsika tsy misy isalasalana: HomePod sy AirPower
2 IPad Pro vaovao tsy misy fefy
3 IPad mora kokoa amin'ny taona 2018
4 IPhones vaovao telo, haben'ny efijery roa vaovao
5 Apple Watch vaovao ho an'ny taona 2018
6 Fanavaozana ny solosaina Mac
7 AirPods Vaovao
Izay ho hitantsika tsy misy isalasalana: HomePod sy AirPower
Apple dia mbola manana fotoana maromaro andrasana miaraka amin'ireo mpampiasa azy, miaraka amin'ny anarana roa voafaritra tsara: HomePod sy AirPower. Mpandahateny izay hananan'ny kalitaon'ny feo ny "faharanitan-tsaina" -ny sy ny base induction izay hamela ny famerenana indray miaraka ny iPhone, Apple Watch ary AirPods. Nambara tamin'ny 2017, azo antoka ny fahatongavan'izy ireo amin'ny taona 2018.
Ny fankalazana ny HomePod no ho mpandahateny voalohany indrindra, ary rehefa miteny an'io izahay dia ny tena tianay holazaina dia ny hoe tsy te-hanao fitaovana amin'ny fomba Amazon Echo na Google Home i Apple. Apple dia mila fitaovana manana kalitao miavaka amin'ny feo Izy io dia afaka mamaritra ny toetoetran'ny efitrano misy azy sy ny toerana misy azy ao anatin'io efitrano io mba hanitsiana ny feo amin'ireo toe-javatra ireo ary hanolotra antsika ny kalitao faran'izay avo lenta. Ho an'ity dia manana mpibitsika 7 izy, samy manana ny mpamiliny avy, ary woofer 4-inch miatrika miakatra, ho fanampin'ireo mpandahateny enina izay hisambotra ny feontsika tsy misy olana.
Mazava ho azy fa hanana Siri koa ity mpandahateny ity, ary amin'ny Apple assist dia afaka manome torolàlana am-peo isika hanombohana mitendry mozika na mandefa hafatra an-tsoratra, ohatra, saingy tsy hanana asa mandroso toy ny mpandahateny amin'ny fifaninanana izay tsy tian'ny maro. Ho hita amin'ny loko mainty sy fotsy izy io, ary efa natomboka tamin'ny 2017 ny fandefasana azy, saingy ny Apple tamin'ny minitra farany dia nanemotra azy hatramin'ny fiandohan'ny taona 2018 tsy misy daty marina. Ny vidiny dia $ 349 nefa tsy fantany ny vidiny any amin'ny firenena hafa ivelan'i Etazonia.
Ny toby Apple AirPower no vokatra voalohany amin'ny orinasa, izay tsy namoaka tohodrano ho an'ny iPhone ihany hatreto. Ity toby famahanana tsy misy tariby ity dia hifanaraka amin'ny fenitra Qi, ary koa ny fandefasana farany ny orinasa, izay toa nanapa-kevitra ihany ny handray io fenitra indostrialy io. Izy io dia hifanaraka amin'ny famahanana haingana ny finday amin'ny iPhone ary araka ny asehon'ny sary dia ho afaka mamerina mamorona fitaovana telo miaraka izy ireo. Ny iPbone farany (8 sy 8 Plus plus X), Apple Watch Series 3 ary AirPods misy boaty vaovao mifanentana ihany (mbola tsy misy) dia azo averina ampiasaina indray avy amin'ity base ity. Tsy fantatray ny daty marina (fiandohan'ny taona 2018) na ny vidiny, na dia miresaka tsaho momba ny vola tsy azo iadian-kevitra aza ny $ 199 any Etazonia.
IPad Pro vaovao tsy misy fefy
Vantany vao vita miaraka amin'ireo vokatra fantatsika fa ho tonga eny na eny, manomboka amin'ny tsaho momba ny famoahana vaovao isika, ary ao anatin'ireny tsaho ireny dia iPad mahery mpiady mahery ny iPad Pro. Aorian'ny fandefasana ny iPhone X miaraka amin'ny efijery izay mibahana saika ny lafivalon'ny rindrambaiko rehetra dia tsy misy fisalasalana fa ny iPad Pro no ho manaraka hampiditra an'ity famolavolana vaovao ity. Ny rafitra famantarana ny tarehy (Face ID) an'ny Apple dia tsy ho banga amin'ireo iPads vaovao ireo, ary Apple Pencil vaovao nohavaozina mihitsy no tsaho. ary angamba amin'ny fiasa vaovao. Miharihary fa hampidirin'izy ireo ireo mpikirakira A11 Bionic vaovao (angamba A11X tahaka ny fanaon'i Apple amin'ny takelaka misy azy).
Ny tsy fantatra dia inona no hataon'i Apple amin'ny haben'ny efijery, satria mifanohitra ny tsaho. Misy ny milaza fa hifikitra amin'ny habe 10,5-inch i Apple, hahatonga ny iPad ho kely kokoa noho ity famolavolana tsy misy rafitra vaovao ity. Ny sasany kosa milaza fa hahatratra ny 12,9-inch ihany koa ity famolavolana ity. Ny toa mazava dia ny hanohizan'ny orinasa filokana amin'ny teknolojia LCD ho an'ireo efijery ireo, satria ny fanovana ny OLED dia fanamby lehibe eo amin'ny sehatry ny famokarana sy ny sarany izay tsy tian'ny Apple ampiharina amin'ireo takelaka misy azy. Ny daty fametrahana? Ny filokana dia miresaka aorian'ny fahavaratra.
IPad mora kokoa amin'ny taona 2018
Nanaitra antsika i Apple tamin'ny taon-dasa tamin'ny fandefasana ny iPad 2017, ny takelaka mora vidy indrindra natombok'io orinasa io hatrizay, amin'ny ezaka mazava handresena lahatra ny olona hanavao ny takelaka misy azy ireo na hisafidy izany fa tsy safidy hafa mora vidy eny an-tsena. Ity iPad 2017 dia nampiditra ny processeur A9 izay nanome hery lehibe ho azy, saingy nanana ny lafiny ratsy teo amin'ny efijery, izay famerenana amin'ny modely teo aloha, ary koa amin'ny endriny, matevina ihany koa. Angamba ny sasany amin'ireto olana ireto dia mety ho voavaha amin'ny taranaka ho avy afaka nambaran'i Apple amin'ity lohataona ity.
Ny iPad 2018 dia mety hanapaka ny firaketana ny vidin'ny teo alohany, manomboka amin'ny $ 259, na dia tsaho mbola tsy re loatra aza ity ary toa sarotra ho hita fa tanteraka. Angamba io no ezaka farany nataon'ny Apple hamerenana indray ny tsena iray izay efa nihena ho an'ny faritra maro ary ny hany vahaolana tokana hifaninanana amin'ireo takelaka mora vidy maro izay nampidiran'ny fifaninanana teo amin'ny talantak'ireo fivarotana.
IPhones vaovao telo, haben'ny efijery roa vaovao
Apple dia nandefa ny iPhone X nandrasana hatry ny ela tamin'ity taona ity, nanararaotra ny tsingerintaona XNUMX hatramin'ny nampidirana ny iPhone voalohany. Rehefa afaka volana maro dia nanombatombana momba ny hoe hampidirina ao anaty efijery any aoriana ilay sensor momba ny dian-tànana Apple dia nifidy ny hisaraka amin'ny Touch ID ary hanangana rafitra famantaran-tarehy vaovao, Face ID. IPhone kely kely kokoa nefa misy fàfana lehibe kokoa, bateria miendrika L vaovao ary famolavolana vaovao niverina tamin'ny vy sy vera taorian'ny taona maro tamin'ny fampiasana aliminioma ho singa lehibe amin'ny vokatra malaza indrindra. Ity iPhone X ity no ho iray manamarika ny làlana izay hizoran'ny finday avo lenta an'ny orinasa amin'ny taona ho avy, ary ny tombantombana momba ireo maodely iPhone ho hitantsika amin'ity taona ity dia efa tototry ny tambajotra.
Vinavina ny olona fa mety handefa maodely iPhone telo vaovao i Apple, misy habe efijery roa vaovao. Ny iPhone XI mitovy habe amin'ny maodely ankehitriny (5,8 santimetatra), iPhone XI Plus misy 6,5 santimetatra ary hakitroky ny pixel izay mety hahatratra hatramin'ny 500 dpi sy ny karazany OLED; ary maodely iray hafa izay ho mora vidy kokoa amin'ny habe 6,1 santimetatra sy ny efijery LCD. Ny rehetra dia hanana endrika mitovy, tsy misy bika, ary mety mifanaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby, ankoatry ny fampidirana ny Face ID. Mpandrindra matanjaka kokoa, fanatsarana batterie ary puce LTE haingana dia sasany amin'ireo fanatsarana izay hahitana ireo maodely vaovao tsy ho tonga raha tsy amin'ny faran'ny taona.
Apple Watch vaovao ho an'ny taona 2018
Ny fiambenana Apple dia mpiorina hatrany amin'ny tsaho manodidina ny orinasa, ary nisy ny fiheverana momba ny fanovana endrika nandritra ny taona vitsivitsy. Ny Apple Watch dia mijanona tsy miova amin'ny famolavolana hatramin'ny nanombohany ny taona 2015, ary ny 2018 dia mety ho ny taona izay nandalovany fiovana lehibe. Ny efijery microLED dia afaka mamela azy io amin'ny alàlan'ny fahombiazan'ny angovo bebe kokoa sy manify, ary ny habeny dia mahatonga azy ho tonga lafatra ho fandriana fitsapana an'i Apple ary hitondra izany haitao izany any aoriana any amin'ny iPhone. Tadidio fa ity indrindra no zava-nitranga tamin'ny efijery OLED, izay nandefa ny Apple Watch tamin'ny 2015 ary nahatratra ny iPhone tamin'ny 2017.
Rehefa miresaka momba ny Apple Watch dia be ny resaka momba ny fifandraisany amin'ny fahasalamana, ary momba ny fampidirana sensor vaovao mifandraika amin'izany. Ny Apple Watch vaovao dia mety hampiditra sensor ho fanatanterahana electrocardiograms ary amin'izay dia afaka mihoatra ny tahan'ny fony fotsiny izay arahiany ankehitriny. Pulse oximetry hahafantarana ny fifantohan'ny oksizena ao anaty ra sy ireo sensor amin'ny fandrefesana glucose ao anaty ra dia efa noeritreretina ihany koa saingy toa sarotra kokoa ny nahatongavan'izy ireo ato ho ato, indrindra ireo segondra. Ity Apple Watch vaovao ity, izay hisy modely roa (WiFi sy LTE) dia tsy haseho hatramin'ny volana septambra, miaraka amin'ny iPhone vaovao.
Fanavaozana ny solosaina Mac
Solosaina dia iray amin'ireo lahasa niandrasana an'i Apple efa ela. Ny sasany amin'ireo maodeliny dia manana endrika izay tsy novaina nandritra ny taona maro, toy ny iMac, ary ny sasany kosa eo anelanelany izay tsy fantatra izay halehany, toy ny MacBook Air. Ny ataon'i Apple amin'ny solosainy dia tsy fantatra tanteraka, ary matetika dia zavatra izay tsy dia marina ny tsaho.
Navoaka ny iMac Pro vaovao na dia natolotra antsika tamin'ny volana Jona 2017 aza, ary mety havaozina amin'ity taona ity. Ny 21,5 sy 27-inch iMac dia havaozina, na dia amin'ny fanatsarana anatiny ihany aza, toy ny nitranga isan-taona nandritra ny fotoana ela. Azonao atao ve ny misafidy ny volondavenona mahazatra na ny volondavenona an'ny Pro? Toa tsy azo inoana izany, satria toa tsy azo inoana ihany koa fa hanana endrika endrika lehibe izy ireo amin'ity taona ity.
Ny MacBook angamba no maodely voalohany havaozina amin'ity taona ity. Miaraka amin'ny taranaka roa ao aoriany, ny taona 2018 dia ho hitanao ny fampidirana fanatsarana anatiny sasany, saingy tsy antenaina hisy fiovana lehibe any ivelany koa. Toy izany koa no azo lazaina ho an'ny MacBook Pro, izay ny fivoarany dia mihoatra ny mety ho voafetra amin'ny atitany ihany. Inona no hitranga amin'ny Mac Mini sy MacBook Air? Izy ireo dia roa amin'ireo solosaina izay lazain'ny maro fa tsy maintsy hanjavona, saingy tsy mahalala na inona na inona momba ny tena drafitra ananan'i Apple amin'izy ireo izahay.
Ary ny Mac Pro? Nanamafy i Apple tamin'ny taon-dasa fa miasa amin'ny Mac Pro vaovao izy saingy tsy halefa amin'ny 2017 izany, ho fanampin'ny efijery vaovao. Tsy fantatsika raha hanomboka azy amin'ity taona ity i Apple, fa raha izany dia ara-dalàna ny hitrangany toa ny iMac Pro, miseho amin'ny WWDC 2018 ary manomboka amin'ny faran'ny taona. Azo antoka ny fahafaha-manitatra aorian'ny fivarotana sy ny endrika nohavaozina tanteraka raha oharina amin'ny maodely ankehitriny, saingy tsy misy zavatra hafa fantatsika momba ity solosaina vaovao ity.
Ny headphone Apple dia mitohy miteraka fahatsapana ary iray amin'ireo vokatra mahomby indrindra eo amin'ireo mpampiasa, miaraka amin'ny fijerena tena tsara. Taorian'ny herintaona mahery teny an-tsena dia toa tonga ny fotoana fanavaozana izay mihoatra ny fiampangana vaovao miaraka amin'ny fiampangana inductive natolotry ny Appel tamin'ny volana septambra 2017 ary mbola tsy tonga tany an-tsena. Ireo AirPod vaovao ireo dia mety hampiditra fanatsarana amin'ny lafiny mampiady hevitra indrindra, toy ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ho an'ny volume, ankoatry ny fanatsarana ny Bluetooth, toy ny fampidirana ny haitao 5.0 izay efa entin'ny iPhone vaovao, na ny loko vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Inona no azontsika antenaina amin'ny Apple amin'ny 2018